GECO | Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro
Mba hahamora ny fandraisan’ny sarambabembahoaka ny resaka fiovan'ny toetrandro izay fantatra fa resaka sarotra dia namokatra fitaovana iray ny Office National pour l'Environnement (ONE), dia ny Vaofiteny (glossaire) momba ny fiovan’ny toetrandro mba hanampiana ireo teknisiana sy mpahairaha momba ny toetrandro isan-tokony eo amin’ny asa fanentanana sy fanabeazana na fampitan-kevitra izay sahanin’izy ireo.
Tsy tontosa ny famoahana ity fitaovana ity raha tsy teo ny fifarimbonana teo amin’ny mpikambana ao amin’ny Groupe thématique sur le changement climatique (GT-CC) Madagasikara izay mampivondrona sehatrasa maro (tontolo iainana, fandinihana ny toetry ny andro, fambolena sy fiompiana ary jono, fiarovana sy fitahirizana ny biôdiversite, fitantanana ireo loza sy antambo ateraky ny fiovan’ny toetrandro, rano sy angovo, sns).
Tsara ho marihina anefa fa misy amin’ireo teny ao anatin’ity vaofiteny ity dia azo ampiasaina amin’ny sehatra hafa fa misy kosa ireo izay fampiasa amin’ny sehatry ny fiovan’ny toetrandro irery ihany.
Ankoatra ny fahalalana azo amin’ny alalan’ity vaofiteny ity dia antenaina fa hisy ihany koa ny anjara biriky hoentiny amin’ny fanabeazam-boho ny teny malagasy.
Isaorana ny Foibe momba ny teny an’ny Akademia malagasy izay nanao ny dikateny ary nitondra ny traikefany. Eo ihany koa ny Coopération allemande/PGM-E/GIZ sy ny WWF/Norad izay nanohana ara-bola tamin’ny fanatanterahana ny asa.
Dia irariana indrindra ny fampiasana sy ny fanapariahana ity fitaovana ity amin’ny tokony ho izy.
Name : Vaofiteny momba ny fiovan’ny toetrandro
Office National pour l’Environnement